Avy amin'ny haizina mankany amin'ny mazava - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2022-01 > Avy amin'ny maizina mankany amin'ny mazava
Nilaza i Isaia mpaminany fa hoentina ho babo ny vahoaka voafidin’ny Israely. Ny fahababoana dia mihoatra noho ny haizina, dia fahatsapana fandaozana ao anatin'ny fanirery sy ny vahiny. Nampanantena ho an’Andriamanitra anefa i Isaia fa Andriamanitra mihitsy no ho avy ary hanova ny anjaran’ny olombelona.
Tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha dia niandry ny Mesia ny olona. Nino izy ireo fa hanavotra azy ireo amin’ny fanandevozan’ny haizina lao Izy.
Tokony ho fitonjato taona tatỳ aoriana, dia tonga ny fotoana. Imanoela, “Andriamanitra momba antsika”, nampanantenain’i Isaia, dia teraka tao Betlehema. Nanantena ny Jiosy sasany fa hanafaka ny vahoaka amin’ny tanan’ny Romanina i Jesosy, izay nitana sy nitana ny Tany Nampanantenaina tamin’ny fomba hentitra.
Niandry ny ondriny tany an-tsaha ny mpiandry ondry tamin’io alina io. Niambina ny andian’ondry izy ireo, ka niaro azy tamin’ny bibidia ary namonjy azy tamin’ny mpangalatra. Lehilahy nanao ny asany izy ireo na dia tao anatin’ny haizina tanteraka aza. Na dia teo aza ny asany tompon'andraikitra, dia hita ho toy ny olon-kafa teo amin'ny fiaraha-monina ireo mpiandry ondry.
Tampoka teo dia nisy hazavana mamirapiratra namirapiratra nanodidina azy ireo ary nisy anjely iray nanambara ny fahaterahan’ny Mpamonjy tamin’ireo mpiandry ondry. Nahery vaika ny famirapiratan’ny hazavana ka talanjona sy raiki-tahotra ireo mpiandry ondry. Nampionona azy ilay anjely nanao hoe: “Aza matahotra! Indro, mitondra teny mahafaly aminareo aho, izay hanjo ny firenena rehetra; fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio, dia Kristy Tompo ao an-tanànan'i Davida. Ary izao no ho famantarana: ho hitanareo ny Zaza voahodidina lamban-jaza ka mandry eo amin’ny fihinanam-bilona” (Lio. 2,10-12).
Ilay anjely iraka sy anjely maro be niaraka taminy dia nidera an’Andriamanitra sy nanome voninahitra Azy. Dia lasa ny mpiandry ondry niaraka tamin'izay ka nandeha faingana. Hitan’izy ireo ilay zaza, dia i Maria sy i Josefa, araka ny nampanantenain’ny anjely azy. Rehefa nahita sy niaina ny zava-drehetra izy ireo, dia nilaza izany tamin'ny olom-pantany rehetra, ary nidera sy nidera an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra nolazaina taminy momba ity zaza ity.
Tohina aho tamin'ity tantara ity ary fantatro fa, tahaka ireo mpiandry ondry, dia olona voahilikilika aho. Teraka mpanota ary faly fa teraka i Jesoa Mpamonjy. Tsy izany ihany, fa amin’ny alalan’ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin’ny maty ary ny fiainany no ahazoako mandray anjara amin’ny fiainany. Izaho dia niara-niditra taminy hatramin'ny haizin'ny fahafatesana ka hatramin'ny fahazavan'ny fiainana.
Ianao koa ry mpamaky malala dia afaka miara-miaina amin’i Jesosy ao anatin’ny hazavana mamirapiratra sy midera sy manome voninahitra Azy raha niaina sy niaina izany. Ny fifaliana dia ny manao izany miaraka amin’ny mpiara-manompo sy mitory ny vaovao tsara amin’ny mpiara-belona amintsika.